Fiarovana ny tontolo iainana : betsaka ny asa miandry ankoatra ny fambolen-kazo | NewsMada
Fiarovana ny tontolo iainana : betsaka ny asa miandry ankoatra ny fambolen-kazo
Nandritra ny fifampiarahabana natratra ny taona 2016, nanaovan’ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola fambolen-kazo. Zana-kazo 5.000 novolena tamin’izany teny Andranovelona, kaominina Mahitsy. Nambaran’ny minisitra Rakotoarimanana Gervais fa adidin’ny rehetra ny voly hazo ho fiatrehana ny loza voajanahary, indrindra manoloana izao fiovan’ny toetr’andro izao. Betsaka ny asa miandry raha ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika. Manana adidy amin’izany ny tsirairay, isan-tokantrano, fokontany, kaominina, distrika, faritra, fikambanana, toeram-piasana amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina rehetra, sns.
Miankina betsaka amin’io tontolo iainana io ny asa fampandrosoana. Raha nofaritana, ohatra, ny politika firosoana amin’ny angovo azo havaozina, tsy hahitam-pahombiazana mihitsy izany raha tsy tsara tantana ny tontolo iainana ; tsy hisy fambolena vanona sy hamokatra eto raha ratsy mandavantaona ny toetr’andro, sns. Sarotra ny hisondrotan’ny harinkarena raha tsy voantandrina ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny tetika samihafa.
Ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, miharitra ny renirano, maina ny velaran-tany midadasika an’hetsiny hekitara, simba sy mihotsaka ny nofon-tany, amin’ny tanàn-dehibe maro toy ny eto an-dRenivohitra, maloto tanteraka ny rivotra. Sakana ho an’ny asa fampandrosoana daholo ireo raha tsy atao laharam-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana. Vahaolana, tsy ny fambolen-kazo ihany fa ny hampihena ny fahantran’ny maro anisa.